Manodidina ny 65% ny Malagasy nilaza fa efa niharan’ny kolikoly teo amin’ny sehatry ny fahasalamana. - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 27 Septambra 2019 ao amin'ny
Tranga mahasorena no havoitr’i Transparency International – Initiative Madagascar (TI-IM) : misakana ny Malagasy hisitraka ny zony araka ny tokony ho izy eo amin’ny lafiny sosialy, toe-karena ary kolotsaina ny kolikoly. Anisan’ny porofo mivaingana indrindra amin’izany ny sehatry ny fahasalamana.
Miparitaka sy miziriziry ny kolikoly ary manjary lasa fahazarana ny fanaovana azy, ka k mbola manampy trotraka ireo fahasahiranana maro efa mianjady amin’ny Malagasy, indrindra eo amin’ny lafiny fahasalamana. Manoloana izany, nanatanteraka fikarohana fanadihadiana1 iray izay mandrefy ny sarany sy ny fiantraikan’ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara ny TI-IM. Tafiditra ao anatin’ny tetikasa Tsaboy Ny Gasy2, izay tohanan’ny Vondrona Eoropeana izany. Navoaka androany teto amin’ny Hôtel Le Louvre Antaninarenina ny vokam-pikarohan’io fanadihadihana io.
Nasongadina tamin’izany ireo karazana kolikoly izay manimba ny tontolon’ny fahasalamana eto Madagasikara : anisan’izany ny fampitomboana ny vidin’ny fanafody mihoatra ny tokony ho izy, ny fanerena ny marary hanatona mpitsabo lafo karama kokoa, , ny fahalafosana mihoa-papan’ny ny fahafahana mitsabo, ny fahadisoana sy ny fanamaivanana ataon’ny dokotera, ary ihany koa ny fanerena ankolaka na mivantana ny olona hanao tsindry bokotra na hampiasa ny olom-pantany izay vao mety ho voatsabo.
Mazava ny vokatry ny fanadihadiana Tsaboy ny Gasy : misy tokoa ny kolikoly eo amin’ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara. Nanamafy izany avokoa ny 84%n’ny olona nohadihadiana. 37% ny tahan’ireo nanaiky fa efa tafiditra tamina resaka kolikoly, ka tany Antsiranana no nahitana taham-pandraisana anjara avo indrindra (69%) ; ary 65% ny tahan’ireo milaza fa efa niharan’ny kolikoly. Antananarivo (73%) sy Antsiranana araka izany no faritany nahitana olona niharan’ny kolikoly be indrindra, ary 63% tamin’ireo olona nanaovana fanadihadiana no manaiky fa tokony mametraka fitoriana hatrany raha sendra ny tranga-na kolikoly. Ireo mahantra sy sahirana no tena ianjadian’ny vokadratsin’ireo fandikan-dalàna voatanisa rehetra ireo satria tampi-dalankaleha izy ka mety hiaran-doza ny hiafarany.
Mba hitondrana vahaolana amin’izany, manao antso avo amin’ny mpitondra sy ny tomponandraikitra isan’ambaratongany eo amin’ny Fahasalamana ny TI-IM mba hisian’ny fitantanana mirindra sy marina eo amin’ io sehatra io amin’ny alalan’ny fanovàna lalàna sy rafitra ary ny fanasaziana. Tokony ho apetraky ny lalàna fa miara-tompon’andraikitra amin’izay mpiasany tratra nanao kolikoly koa ny toeram-pitsaboana tsirairay. Andraikitry ny fanjakana ny manara-maso sy manadihady momba ny toeram-pitsaboana tsirairay avy ary ihany koa mampirisika ny fitorohana ireo trangana kolikoly amin’ny sehatra rehetra tsy an-kanavaka. Farany, tsy tokony hijanona ho saritsariny fotsiny intsony ny fandraisan’ny fanjakana anjara amin’ny lafiny ara-bola eo amin’ny sehatry ny fahasalamana. Fotoana izao handraisana andraikitra. Tsaboy ny Gasy !
Antaninarenina, 27 septambra 2019